OPPO Enco W51 Yechokwadi Wireless Earbuds Ongororo: Inoshanda Ruzha Kanzura Yakaitwa Isingatengese
OPPO yakasvetuka pane yechokwadi isina waya nzeve mabhendi nekutanga kwe OPPO Enco Yemahara kumashure munaZvita gore rakapera. Izvi zvakateverwa nekukurumidza nemamwe majaira maviri: Enco W11 nzeve uye AirPods Pro-chimiro Enco W31. Zvino, OPPO yadzoka zvakare nemhando nyowani mune Enco mutsara. Sangana neOPPO Enco W51: OPPO yazvino kuyedza pamusika wechokwadi usina waya wemakutu nekuchengetedza zvakanaka maficha eiyo yapfuura modhi uku uchiunza zvimwe zvekubudirira pamutengo uyo unozopa vakwikwidzi kumhanyisa mari yavo. Iyo Enco W51 iri OPPO ekutanga maTWs earbuds ekupa Active Noise Cancellation uye zvakare iri yega yekuzvipa nemutengo uyu.
Kutasva iyo imwechete AirPods Pro-yakafemerwa dhizaini seyakatangira uye kusanganisa maficha senge ANC uye katatu-maikorofoni kudzikisira ruzha rwekufona, iyo OPPO Enco W51 inotaridzika inokwezva, kunyanya pamutengo wayo ₹ 5,000 mutengo. Asi zvakakosha mari yako here?
Ndanga ndichishandisa iyo OPPO Enco W51 semutyairi wangu wezuva nezuva TWS earbuds kwemasvondo maviri apfuura, uye izvi ndizvo zvandinofunga nezvavo.
OPPO Enco W51: Magadzirirwo
Vaka uye Kurera
IP54 mvura & guruva kuramba
55.5g (ine kesi)
Mutyairi & Frequency mhinduro
Kumwe kuroora 7mm zvine simba mutyairi
Kunzwa kwekutyaira: 103dB @ 1kHz
MAKARALI USB 5.0
Makodhi: AAC, SBC
Bhatiri & Kubhadharisa
480mAh (yekuchaja kesi)
Maawa 3.5 pamutero mumwe chete (une ANC)
Maawa makumi maviri ane kesi yekuchaja
USB Type C doko
Pair yeEnco W51
3x silicon matipi emhete
USB Kuchaja tambo
Kuchengetedza uye Waradhi yeadhi
Ongorora: OPPO yakanditumira yuniti yekuongorora yeEnco W51 muFloral White munaGunyana 16. OPPO yakanga isina zvekushandisa mune zveruzivo urwu. Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, kucherechedzwa mune ino ongororo kuri maererano nezve mafoni eApple.
Dhizaini, Nyaradzo, Kudzora
Iine chena yeruvara rwayo uye dhizaini dhizaini, zviri nyore kuzivisa iyo OPPO Enco W51 seimwezve Apple AirPods Pro dombo, zvirinani pakutanga kuona. Pamusoro pekutarisisa, zvisinei, pane misiyano yakati wandei inowanikwa pakati pekugadzirwa kweOPOO uye maApple echokwadi asina waya nzeve. Semuenzaniso, iyo OPPO Enco W51 haina kuvaka unibody yakafanana neAirPods uye inoshandisa yakadzika matanda pane masirinda. AirPods kurudziro padivi, iyo OPPO Enco W51 mapara-anotaridzika anotaridzika ekeyebudhi ane yakasarudzika dhizaini inobata yayo yega. Iwo mapiritsi-akagadzirwa earbuds uye madzinde anogadzirwa nepurasitiki uye anoratidza kupenya kupenya pane yekunze nzvimbo ine matte kupera kune yemukati divi. Iyo inopenya yekunze nzvimbo yemakapu nzeve inoratidza kusanzwisisika iridescent mhedzisiro apo mwenje unopenya pairi, ichiwedzera kubata kwakanaka kune iyo yakazara dhizaini.
Iwo mahedbuds anoshandisa akapfava, oval-akaumbwa akafanana silicone matipi ayo asingagare zvakanyanyisa zvakadzika mukati memunzeve yako canal. Ivo zvakare akareruka akareruka uye anofema, vachipa yakasununguka yekupfeka ruzivo kwenguva yakareba pasina chero kusagadzikana. Kunyangwe nemazano madiki, iwo mahebhu anopa chengetedzo yakakwana uye haibude nyore munzeve dzako. Ini ndaishandisa iyo OPPO Enco W51 ndichisimudza huremu, ndichimhanya, uye kuchovha bhasikoro, uye havana kubuda kana kudonha nekuda kwekukasira kwejerks kana kuvhunduka. OPPO inosunga matatu ekuwedzera maseti ezve nzeve matipi kuti vashandisi vawane chakakwana chisimbiso chemhepo. Mushure mekuyedza yega yega seti yetipi, ndakagumisa kuti iyo yepakati saizi yepakati yakandipa iyo yakaringana kukwana - ungangoda saizi yakakura zvichienderana nechimiro uye saizi yenzeve dzako.
Munguva yangu neOPPO Enco W51, paingova nechiitiko chimwe chete apo thethea rakasiya earbud rakatsvedza kubva munzeve yangu ndokuwira pasi pandainge ndiri parunhare. Nekudaro, ini ndinofungidzira kuti kukanganisa kune kwangu kusabatwa zvakanaka (ini ndanga ndisina kuvapfeka nemazvo) pane dhizaini kusashanda.
Izvo zvakati, tsaona dzinozoitika, uye hapana vimbiso yekuti hauzopedzisira wadonha kana - -shinga kuti nditi, kurasikirwa nerimwe remabhureki- uye izvo zvinoshanda kune chero echokwadi asinganetsi maearphones zvisinei necheni, modhi, kana dhizaini.
Iyo OPPO Enco W51 inouya mukati meiyi piro-yakaita epurasitiki kesi iyo inotaridzika kunakidza uye inonzwa yakanaka muruoko. Makona akapoteredzwa uye saizi yakaumbana zvinoreva kuti kesi iri nyore kutakura yakatenderedza uye zvakatsvedza masiraidhi mukati nekunze kwehomwe yangu. Iyo kesi ine inopenya penya iyo inovharwa neminwe yeminwe uye smudges nekukurumidza zvakanyanya. Nekudaro, iyo chena kesi inoita zvinoshamisa zvinoshamisa basa rekuviga ivo. Mhosva inovhura kunge bhegi, ichizarura mahebhu akavharirwa mumakomba avo nemagineti mapini pazasi ayo anovabatira munzvimbo. Iyo yakatenderera bhatani bhatani ine siringi mhete inoiswa pane yepazasi chin pamwe neiyo diki LED kumusoro chete. Iwo mahedhifoni anozozvibatanidza otomatiki kune yekupedzisira paired mudziyo kana uchangovhura iyo kesi uye nekutsigira nekukurumidza pairing pane sarudza OPPO mafoni.
Kunyangwe huwandu hwakazara hwekuvaka hwenyaya hwakadzikama, hinge yepurasitiki haisimbise kuvimba kwakanyanya maererano nekugara kwenguva refu. Pese pandinovhura kesi, ndinofanira kuzviyeuchidza kuti ndichenjere kuti ndisasundire muvharo kure zvakanyanya.
Iyo OPPO Enco W51 inotsigira chaiyo yakakosha pombi yekuratidzira mimhanzi, mafoni, uye ANC. Kupeta kaviri kuruboshwe kwekumusoro kunoita / kusabvisa kudzimiswa kweruzha, uku uchirovera padanda rerudyi kaviri switch kune inotevera track. Iwe unogona zvakare kudaidza iyo Google Assistant (kana chero mubatsiri wawakagadzika seasipo) nekukanda imwe yematemu katatu. Mitezo yacho inonamira uye inowanzoda kuedza kwakati wandei vasati vanyoresa matepi. Iwo mahearbuds anouyawo akashongedzerwa neiyo optical infrared sensor yekupfeka kuona, iyo inomira yega uye inotangazve odhiyo kana iwe waburitsa mahedhiyo uye woadzosera munzeve dzako.
OPPO Enco W51: Ruzha Mhando
Iyo OPPO Enco W51 inoratidzira imwechete 7mm inesimba mutyairi pamwe neDual TPU composite graphene diaphragms. OPPO inoti ivo vakashandisawo system-wide algorithm iyo inobhadharira iyo odhiyo yemhando yekurasikirwa kunobva kune inoshanda ruzha kukanzura ficha.
Kuuya kune chaiyo-yepasirese mhando yemhando, iyo OPPO Enco W51 inosvitsa inodziya, inokoka ruzha nemabhasi akasimbiswa uye anotaridzika kufamba, zvichivaita sarudzo yakanaka yekusajairika, kuteerera kwezuva nezuva.
Bass performance yeEnco W51 yakanaka asi haina kuenzana. Inoshaya punchiness uye rumble mudunhu repasi-bass. Izvi zvichave zvichinyatso kuoneka paunenge uchitamba EDM uye Hip Hop maturu uko kunogutsa thump uye kukanganisa kunodiwa, asi haifanire kunge iri nyaya nemhando dzese dzemimhanzi. Parutivi rweflip, pane kukwana kwakakwana uye kudziya munzvimbo dzepamusoro, izvo zvinobatsira kuchengetedza zvinhu zvinonakidza.
Midrange inodzoserwa zvishoma, ichitora kumashure sisitimu kana ichienzaniswa neyekuzasi uye kwakakwirira mafambiro. Kuteerera Kunaka kwaAdam Lambert kutora Cher's Tenda, mazwi akanzwika kure kure uye kushaya kuzara.
Treble yakapfava uye ine hupenyu asi inogona kusangana seyakaomarara pane zvakanyanyisa kupenya kurekodha. Ndakaonawo kubatana kusiri kwepanyama pane dzimwe nzira nekusimbisa kwakanyanya kune iwo akapinza "ss," "sh," uye "t" mavara, ainzwika kuneta pane dzimwe nzira.
Izvo zvinonyadzisa iyo OPPO Enco W51 haikuregi iwe uchigadzirisa ruzha nenzira iyo OPPO Enco W31 yakaita, iyo yakapa Balanced modhi yekusarerekera ruzha uye yakatsaurirwa Bass modhi yekuwedzera mabhasi kukanda. Kunzwisisa kwangu ndekwekuti nekuda kwekuwedzera maikorofoni, mageeti emhepo, uye chip yekudzora ruzha, OPPO inogona kunge isina kusiya nzvimbo yakakwana kuti ikwane dzimba dzakatsaurwa dzebass dzinodikanwa yeBass modhi. Saka pachinzvimbo chekusarudza pakati peNeutral kana Bass-rinorema chimiro, OPPO yakatora nzira yepakati ndokugadzirisa ruzha nenzira yaizofadza vateereri - zvichinyatsooneka kubva mukusimbisa kwakanyanya pamabhasi epamusoro uye akakwirisa mafambiro epamusoro.
Iyo OPPO Enco W51 hainzwike seyakanatswa sechimwe chinhu senge Enco M31, asi ivo vachiri zvakawanda zvinonakidza uye zvinonakidza kuteerera.
ANC neMicrophone Performance
Active Noise Cancellation (ANC) ndeimwe yemakona makuru eOPPO Enco W51. Iwo earbuds anoshandisa anokwana matanhatu mamaikorofoni uye mbiri-musimboti yedhijitari yekudzora ruzha chip kuona uye kudzikisa ruzha rwakakomberedza. OPPO inoti iyo Enco W6 inogona kuwana zvakaringana se51db yekudzora ruzha, uye nepo isu tisingakwanise kuisa iyo nhamba kuyedza, kudzimiswa kweruzha kunoshanda zvinoshamisa. Iwe unogona kunyatsonzwa iko kuita kweANC nekukurumidza paunongoisa pamahedhifoni. OPPO inojekesa kuti kudzikiswa kweruzha kunonyanya kushanda mune yakaderera frequency renji uye hakuzoshanda izvo zvinobudirira pamhepo-frequency ruzha.
Nechisimbiso chakakodzera uye ANC yakavhurwa, iyo OPPO Enco W51 inobudirira inodzivisa monotone ruzha senge kupopota kweACs uye mafeni esiringi, ndege dzinopfuura pamusoro, injini ruzha rwemavhiri maviri nemotokari, uye ruzha rwemishini. Kuenzaniswa neyangu Sennheiser 4.50 HD ANC, iyo inongovharira kunze rumble, iyo OPPO Enco W51 inoshanda zvinoshamisa mukutaura zvakare, ichideredza zvakanyanya manzwi emunhu uye kutaurirana kumashure. Iko ANC isinganyatso kuita mutsauko iri mukusefa ruzha rwakakwira uye rwepakati - hwamanda, muridzo, vanhu vachidanidzira, vacheche vachichema, nezvimwe.
Kunyangwe kana iyo OPPO Enco W51 isingakwanise kukuendesa iwe munyika ine hukuru hwekugara, inoburitsa ruzha rwakapoterera kusvika parusingachakunetsi, ichikubvumidza kuti utarise zviri nani pabasa rako kana kudzidza.
Kuenda kumakrofoni kuita, iyo OPPO Enco W51 inopa yakasarudzika mhando yekufona. Ndanga ndichingove ndichishandisa mahedhifoni kuita manzwi uye vhidhiyo mafoni kubva pandakaagamuchira, uye ndinofanira kuti vanorovera chikamu ichi. Wese wandifonera wandataura naye akataura izwi rangu raiuya zvakanyanyisa uye zvakajeka sekunge ndaitaura ndakanangana nenhare. Kunze kwemaikorofoni-ekudzima ruzha, nzeve imwe neimwe inouyawo yakagadzirirwa mapaipi emhepo kudzivirira ruzha rwemhepo kubva kunzwika kune rumwe rutivi, uye ndinogona kupupura kuti vanoita mutsauko wakakura mumamiriro emhepo. Pane imwe nguva, ndanga ndichitaura nemuzukuru wangu ndichifambisa bhasikoro rangu nemhepo ine simba ichivhuvhuta kumeso kwangu chaiko, asi zvakadaro aisakwanisa kunzwa kana rustle.
Range uye Latency
Iyo OPPO Enco W51 inotsigira Bluetooth 5.0, pamwe neyepasi-latency mbiri yekutapurika protocol yekukurumidza uye kwakanyanya kudhinda data. OPPO inoti binaural kutaurirana inobvumira yega yega nzeve kuti iite yakazvimiririra kubatana kune inomiririra chishandiso, zvichikonzera mukuderera kukuru kweodhiyo / vhidhiyo latency. Sezvaitarisirwa, handina kuona lag kana kunonoka chero paitarisa mavhidhiyo kuYouTube uye Amazon Prime Vhidhiyo. Nekudaro, mutambo wenyaya wakasiyana. Iyo OPPO Enco W51 haina kupa yakakwira-magumo codec senge aptX kana LDAC, uye haina kupa yakatsaurwa yakaderera-latency modhi, ichivaita vasina kukodzera kumitambo yekutamba Ndakavaedza ne Call of Duty: Nhare, uye pakanga paine kunonoka kukuru pakati pekubaya bhatani remoto uye kunyatsonzwa kupfura. Kuti uzviise zvakapusa, aya mahebhu haakodzere kukwikwidza mutambo, uye uchave zvirinani kuenda kune chimwe chinhu chinotsigira aptX kana LDAC.
Panyaya yechiratidzo renji, iyo OPPO Enco W51 haina kupa kugamuchirwa kwakasimba. Iwo mahearbuds akadonhedza nyore kubatana kana ndikasachengeta yakajeka mutsara wekuona nefoni yangu kana kana ndikatamira kune inotevera imba. Nekudaro, sekureba sekunge iwe uri munzvimbo imwechete seyeyekushandisa mudziyo, haufanire kutarisana nenyaya dzipi nedzipi.
OPPO Enco W51: Hupenyu hweBhatiri
Hupenyu hwebhatiri hweOPPO Enco W51 iri pakati nepakati. Yega nzeve nzeve inorongedza mu25mAh bhatiri sero kweinonzi hupenyu hwebhatiri hwemaawa 3.5 neANC uye ne4 maawa neANC yadzimwa. Iyo kesi yekuchaja inowedzera mamwe maawa makumi maviri ebhatiri, ichiunza hupenyu hwese hwebhatiri kumaawa 20. Kunze kwekunge iwe uri kuputika mimhanzi kwemaawa ekupedzisira usingatore mabhureki pakati, iwo maawa 23.5 enguva yekuteerera haina kunyanya kuipa. Ini ndinonyanya kuteerera mimhanzi kutenderedza 3.5-30% vhoriyamu, nechikamu chimwe chete chisinga pfuure maawa maviri. Nekushandisa uku, ini handina kumbobvira ndaona maearbuds achibuda muto pakati pemimhanzi kuteerera kana kufona - madiki epamusoro kumusoro kuburikidza nenyaya pakati pemabhureki aigara achiachengeta kumusoro uye achimhanya. Asi yako mileage inogona kusiyana zvichienderana nemaitiro ako ekushandisa.
Iyo kesi inobhadharisa kuburikidza ne USB-Type C chiteshi uye inotora awa kuti ubhadhare zvizere uchishandisa 10W charger. Zvinotoshamisa ndezvokuti, isina waya yekuchaja rutsigiro iripowo pabhodhi, ichikubvumidza iwe kungosiya nyaya yacho pane chero Qi isina waya yekuchaja pad kuti uwane mukana wekuchaja. Sezvo pasina chekufambidzana naye, hazviite kuti uone kuti ingani bhatiri yasara mune iyo kesi uye kana iwe waungazoda kuizadza. OPPO inoratidza chaiyo bhatiri info yenyaya uye mahedhifoni kune mamwe mafoni ayo, asi vamwe vanozofanira kuvimba neiyo Android pane yakakosha uye kazhinji-isiri-yakadaro- Bluetooth bhatiri chiratidzo cheyero. Zvingadai zvakanyatsobatsira kana OPPO yainge yaisa madiki maOD kana mukati mekesi kuratidza zvakajeka hupenyu hwasara hwebhatiri - sezvinoita mabhanga emagetsi. Kune imwechete LED padyo nechaji yekuchaja, asi inongovhenekera kumusoro kuratidza kuti kesi iri kubhadharisa uye inoshandura green kana yazara zvakakwana.
Ini ndaifanira kubhadharisa nyaya yacho kaviri panguva yangu yekuongorora kwemazuva gumi nematatu, iine mashandisiro angu ezuva nezuva anosanganisira 13 maawa emimhanzi inoteerera neANC, maminetsi makumi maviri neshanu ekufona, uye maawa maviri ekushandisa ANC pasina kuridza chero mimhanzi
Iyo OPPO Enco W51 ndeye yakanakisa mapara echokwadi asina waya nzeve dzinopa kukosha kukuru kwemari. Kunyangwe iyo AirPods Pro kurudziro iri pachena, OPPO yaita basa rakanakisa kusiyanisa iyo Enco W51 kubva kune mamwe maAirPods wannabes pamusika. Vanotaridzika vakashongedzwa, kana isingaite premium, uye vanokodzera kupfeka kwenguva yakareba nekutenda kune yavo Ultra-lightweight kuvaka. Ruzha rwavo rwekudzima ruzha runoita basa rakanaka kurongedza ruzha rwezvakatipoteredza uye zvakare kurira pasi mazwi kubva mukukurukurirana kana iwe uchigona kuwana chisimbiso chakakodzera. Uye isu takataura here nezvekuti zvinoshamisa sei izvi nzeve dzezeve kuita zvekufona? Kunyangwe iwe uri mune ine ruzha cafe kana pakati peguta traffic, maOPO Enco W51 mamaikorofoni rega izwi rako rinzwike nekujeka kwakanyanya. Chero bedzi iwe usingawani iwe mune iyo audiophile kirabhu, iyo odhiyo mhando pane yekupa haizokuodza moyo iwe nekudziya kwayo uye kupenya.
Padivi risinganakidze, hupenyu hwebhatiri hunopfuurira hweOPPO Enco W51 hachisi chinhu chekunyora kumba nezvacho. Iwe unozofanirwa kudzosera ma earbuds mune iwo kesi nguva nenguva kuti uone kuti havapere muto mukati mezuva. Iwo mapombi ekudzora haana kuvimbika uye haagone kuenzaniswa kunze kwekunge iwe uine OPPO foni. Ivo zvakare havana wekufambidzana naye, zvinoreva kuti hauzokwanisi kugadzirisa ruzha rwekudzima ruzha, kuwana mhedziso chaiyo yehutano hwebhatiri, kana kubatsirwa nekuvandudzwa kweramangwana uye maficha kuburikidza nekuvandudzwa kweapp. Uye zvakare ivo havagone kukurudzirwa kumitambo nekuda kwavo kwakanyanya latency
Kana wanga uchitsvaga maearbuds echokwadi asina waya ane masimba eANC pamutengo unodhura, iyo OPPO Enco W51 isarudzo inonakidza. Ivo zvakare vanoitika kuve ivo chete vanopa ANC panguva ino yemutengo - iyo Huawei MaharaBudhi Buds 3i, iyo yepedyo imwe nzira, inotengesa kwe ₹ 9,990. Kune rimwe divi, kana ANC isiri chinhu chakakosha kwauri, tinokurudzira kuenda neOPPO Enco W31 pachinzvimbo icho, icho chinopa dhizaini yakafanana uye zvine nharo zvirinani kurira kwe ₹ 1500 zvishoma.
OPPO's Enco W51 yechokwadi isina waya nzeve dzinowanikwa muWhite paAmazon kuUK ne £ 89.00
Tenga kuAmazon UK
Iwe unogona zvakare kutenga iyo OPPO Enco W51 kubva Amazon kuGerman ye € 99.99, kubva Flipkart muIndia ye ₹ 4,999, kana kubva OPPO.com muIndia mune Starry Bhuruu ruvara kune ₹ 4,999.
The post OPPO Enco W51 Yechokwadi Wireless Earbuds Ongororo: Inoshanda Ruzha Kanzura Yakaitwa Isingatengese yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Aya ndiwo akanakisa e-waya mahebhu aunogona kutenga pamutengo wese!
Bvisa tambo neaya anoshamisa echokwadi asina waya
Akanyanya ruzha-kudzima mahedhifoni 2020: Iwo akanakisa ANC mahedhifoni aunogona kutenga
Apple AirPods matipi uye matipi: Maitiro ekuwana zvakanyanya kubva kune Apple isina waya munzeve
Apple AirPods matipi uye manomano: Ungawana sei zvakanyanya kubva paApple isina waya
Iyo Sony WF-1000XM3 yaive yedu mabhudhi eANC kurova kusvika iyo AirPods Pro
Iwo Akanakisa Wireless Earbuds a2022
Apple AirPods Max ongororo: Ecosystem-chete kunaka
Huawei FreeBuds Pro vs Apple AirPods Pro: Iwo Maviri Akanakisa Wireless Nzeve
Iyo yakanakisa waya uye isina waya inomhanya mahedhifoni kutenga
Amazon amazon prime amazon prime video apuro Application software epic mitambo Galaxy Note 20 Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra Google Sheetsiti pamahedhifoni Huawei icloud Instagram chiriporipocho Rinozvikudza ip kero iPhone iPhone 12 iPhone 13 iphone 13 pro max macOS Microsoft Microsoft Edge Mobile app Nhare mbozha office 365 OneDrive OnePlus mataridzikiro Pixel 6 Samsung Galaxy Samsung Galaxy Tab S8 smartphone speedtest kukurumidza bvunzo mapoka tiktok Twitter Vpn WhatsApp whatsapp webhu Windows 10 Windows 11 Kuburitswa Windows Subsystem Ye Android Windows 11 Xiaomi